Coral Reef: The Quiet Life
အပြုံးပန်း said on October 9, 2010 at 7:19 AM
မွေးရပ်မြေကိုပဲ သတိယနေတယ် ဇွန်ရယ်၊
သဘာဝအလျောက် ရတဲ့ စားစရာတွေကို တန်ဖိုးမထားခဲ့ဖူးတာကို ပြန်မြင်ယောင်မိတယ်။
အပြုံးပန်း said on October 9, 2010 at 7:20 AM
Shinlay said on October 9, 2010 at 2:36 PM
အတွေးကမ္ဘာ..မှတ်တမ်း said on October 10, 2010 at 4:44 PM
Quiet Life, The Slave's Dream, Leisure တွေဟာ ကျွန်တော့အကြိုက်.. ကဗျာတွေပါပဲ..အမ မမိုး ရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း ပြည့်ဝ ပါစေ...
အင်ကြင်းသန့် said on October 10, 2010 at 6:25 PM
Ko Paw said on October 22, 2010 at 7:17 PM
ဒီကဗျာထဲက ဘဝမျိုးကို ခုတလော မကြာခဏ တွေးဖြစ်တယ်။ တောင့်တဖြစ်တယ်။
ဇွန်မိုးစက် said on October 22, 2010 at 9:09 PM
ပို့စ်နှင့် မသက်ဆိုက်သော ကော်မန့်များကို blog administrator မှ delete လုပ်ပါမည်။
အိမ့်ချမ်းမြေ့ said on October 23, 2010 at 10:10 AM
TnT said on October 27, 2010 at 1:41 PM
Like it so much. Could feel the peace even when I am reading it. Wish you all the best!